ANDRANOBEVAVA ANALAMAHITSY: ADY TANY MIANTRA AMAN’AINA
On nov 5, 2018 27 118
Tany lehibe iray ahitana trano misy rihana lehibe iray, fitehirizana entana mirefy 60m², Villa basse iray, ary garazy azo asiana fiara efatra no hiadiavana eny amin’ny tribonaly ankehitriny, ary handeha fitsarana ambony amin’ity volana novambra ity.
Raha tsiahivina, ny taona 2011 no nanomboka ny tantara, rehefa narary ka tsy maintsy mila vonjy sy alefa any ampita ho tsaboina ilay tompon’ny tany. Teratany Malagasy no nifanarahana voalohany, izay nikasa ny hanodina ilay toerana ho toby fivarotan-tsolika. Tsy ny tany rehetra no novidiany anefa fa ampahany mirefy 2500m² ihany. Tapaka fa ho 600.000.000 Ariary ny vidiny. Tsy afaka nandoa ny vidin-tany rehetra anefa izy araka ny filazan’ny fianakaviana sy ny mpisolovava azy ireo ka nanome alalana ny hivarotra izany amin’olonkafa, ka averina ny volany rehefa mahita mpividy hafa ny tompon-tany.
Taty aoriana dia nahita mpividy tokoa ny tompon-tany, teratany karana no resy lahatra fa hividy izany 1.200.000 000 Ariary saingy ny tany manontolo kosa anefa fa tsy 2500m² akory.
Araka ny fitarainan’ny fianakaviana tamin’ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety anefa, voafitaka izy ireo ankehitriny, satria tsy voaloa ny vola, sady efa voaroaka amin’ny tany ihany koa izy ireo. “ Antony nahatonga izany, nandritra ny fikarakarana ny taratasy samihafa mba ho ara-dalàna ny taratasy rehetra ( situation jurdique sy ny titre foncier ), nilaza ny mpividy fa 100.000.000 Ariary ( 500 Million Fmg) ihany no soratana amin’ny taratasy fifampivarotana mba tsy handoavan’ity karana ity vola be any amin’ny sampandraharahan’ny fananantany. Nohon’ny fahatsoram-po sy ny famaizana handeha hitsabo tena any ivelany nekena izany”, hoy izy ireo. Na izany aza nametraka fepetra kosa ny tompon-tany araka ny fanazavany fa tsyu azop hafindra amin’ny mpividy vaovao ity ny tany raha tsy feno ny vola vidiny.
Nanomboka teo ihany koa no voalaza fa nivadika ilay teratany Malagasy nividy voalohany ka nitory ny tompon-tany sy ny karana mpividy faharoa. Taorian’ny fifanarahana dia nomena vola izy mba hisintonany ny fitoriany, avo telo heny ny vola tokony naverina tamin’ny no voalaza fa azony.
Amin’izao fotoana izao, mbola miady eny amin’ny fitsarana ny tompon’ny tany satria tsy voaloa ny volan’izy ireo. Ilay teratany karana rahateo etsy ankilan’izay miziriziry ny tsy handoa intsony aloha satria efa nahazo rariny rahateo izy tao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Voalazan’ny didim-pitsarana laharana faha 6593 ny 08 desambra 2014, fa foana ny fifanarahana nisy teo amin’ilay Malagasy mpividy voalohany sy ny tompon’ny tany ka tsy misy tokony hanenjehana azy amin’izany.
Raha ny tokony ho izy, mbola manana 900 000 000 tapitrisa ariary any amin’ilay karana nividy tany ireto mpivarotra saingy misedra olana amin’ny fitakiana izany.
Manao antso avo amin’ny ministeran’ny fitsarana, ny tompon’andraikitra Malagasy ny fianakaviana ankehitriny satria mahatsapa ho voafitaka sy hiaran’ny tsindry hazolena.
FAMPIELEZAN-KEVITRA: SAMY EFA MAMARAMPARANA NY KANDIDA TSIRAIRAY
PRÉSIDENTIELLES 2018: AUCUN INCIDENTS MAJEURS À SIGNALER
LA BMOI REJOINT LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC
TONY ELUMELU: “THE ENTREPRENEURSHIP JOURNEY ENTAILS HARD WORK, DISCIPLINE AND SACRIFICE”,